FAQ - FOSHAN GOODTON FURNITURE CO., LTD
तपाईले चाहानु भएको जवाफ फेला पार्नुहुन्न? हामीलाई हाम्रो सम्पर्क पृष्ठ मार्फत सन्देश पठाउनुहोस्।
तपाईको कम्पनी कहाँ छ? तपाई मलाई आफ्नो कम्पनीको बारेमा थप जानकारी दिन सक्नुहुन्छ?
हाम्रो कम्पनी र कारखाना No.18 Qiaogao रोड, Xiqiao टाउन, Nanhai जिल्ला, Foshan, Guangdong, चीन मा स्थित छन्।
Goodtone Furniture compamy9वर्षको लागि कार्यालय फर्नीचरको उत्पादन र निर्यातमा समर्पित छ, हाम्रा अधिकांश ग्राहकहरू युरोप र अमेरिकामा छन्।
तपाईंको वेबसाइटमा किन कुनै मूल्यहरू देखाइएको छैन?
हाम्रो मूल्यहरू आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरूको आधारमा परिवर्तनको विषय हुन्। Gootone (www.goodtonechair.com) वेबसाइट हाम्रो उत्पादन प्रस्ताव देखाउन डिजाइन गरिएको एक निर्माताको वेबसाइट हो। यदि तपाईं मूल्य जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो इमेलमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
के तपाइँ ODM सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ हामीलाई तपाइँले प्रदान गर्नुभएको डिजाइन द्वारा कुर्सीहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ भने, कृपया थप छलफलको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी कुर्सीको डिजाइन सुधार गर्न केही विचारहरू पनि प्रदान गर्न सक्छौं।
कुर्सीहरूमा वारेन्टी अवधि के हो?
हामी 5-वर्ष वारेन्टी प्रदान गर्दछौं। वारेन्टीमा होस् वा होइन, सबैको सन्तुष्टिमा सबै ग्राहक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने हाम्रो कम्पनीको संस्कृति हो।
तपाईंले हाम्रो बैंक खातामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ:
निश्चित रूपमा हामीले विश्लेषण / अनुरूपताको प्रमाणपत्रहरू सहित अधिकांश कागजातहरू प्रदान गर्न सक्छौं; बीमा; उत्पत्ति, र अन्य निर्यात कागजातहरू आवश्यक भएमा।
तपाईको न्यूनतम अर्डर मात्रा के हो?
हामीलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरू चलिरहेको न्यूनतम अर्डर मात्रा हुन आवश्यक छ। यदि तपाइँ पुन: बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर धेरै सानो मात्रामा, हामी तपाइँलाई हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्न सिफारिस गर्दछौं। यदि तपाइँ हाम्रो उत्पादनहरू मध्ये एकमा विशेष रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई समयमै सम्पर्क गर्नुहोस्, र हामी तपाइँलाई हाम्रो नमूनाहरू र उत्पादन कन्फिगरेसन देखाउनेछौं।
म नमूना कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
कृपया सोधपुछ फारम द्वारा आफ्नो नमूना अनुरोध पठाउनुहोस्।
मैले अर्डर गरेपछि अफिसको कुर्सी प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
हामीसँग व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ?